Knowledge Fahalalana fototra ho an'ny lamba》
Lamba vita amin'ny kofehy vita amboradara
Toko voalohany fahalalana fototra amin'ny lamba
1 yard (Y) = 0.9144 M (M) 1 inch (1 “) = 2.54 CM (CM) 1 yard = 36 santimetatra 1 pounds (LB) = 454 g (g) 1 grama = (OZ) = 28,3 g (g )
Ii. Famaritana ny famaritana lamba:
Nomera Denny: ilazana ny hatevin'ny kofehin'ny fibre lava, izany hoe ny halavan'ny kofehy 9000 metatra, ny lanjany dia 1 grama (g), matetika no faritana ho 1 Dan, solontenan'ny litera anglisy "D". Ohatra, ny kofehy 9000m lava, milanja 70 grama, dia faritana ho 70 Dan. Ampiasaina indrindra hanehoana ny hatevin'ny fibre simika.
2. Isan'ny fehin-kibo sy hakitroky ny hena sy ny kararetra: maneho ny hakitroky ny lamba, izany hoe ny isan'ny kofehin-karona sy ny kararata isaky ny santimetatra toradroa, soloin'ny litera anglisy "T". Tandremo ny isan'ny isan'ny famakafakana ny fomba fanenon-damba, tadiavo ny lalàna mifandraika amin'ny fanenomana, mba handrefesana tsara ny isan'ny isan'ny isa.
3. Isa F: ny kofehy vita amin'ny kofehy na kofehy vita amin'ny kofehy dia misy filamenta maromaro. Ny isa F dia maneho ny isan'ny filamenta ao anaty kofehy vita amin'ny kofehy na kofehy, izay soloin'ny litera anglisy "F". Mifanohitra amin'izany, mihabe ny tanana, vao mainka mafy.
4, ny hatevin'ny kofehy foto-tsakafo: amin'ny ankapobeny, ny fampiasana «kofehy», izany hoe kofehy landihazo iray kilao ny halavany 840 metatra, ity kofehy ity dia antsoina hoe kofehy, miaraka amin'ny litera anglisy "s", toy ny 21 kofehy dia 21 taona. (aorian'ny fiovam-po: 21S = 250D)
5. Fanehoana ny famaritana ny lamba:
Ny hatevin'ny kofehy / F × hatevina / F
Isan'ny kofehy warp + isan'ny kofehy vita amin'ny kofehy
× 60 “azo hafoina 70D × 190T × 60 ″
3. Fanasokajiana lamba:
1. Fanasokajiana voajanahary (ny fanasokajiana iraisana dia toy izao)
Ny fibre dia azo zaraina ho kofehy voajanahary sy kofehy sentetika amin'ny fananany. Ny kofehy voajanahary dia misy landy landy, rongony, volon'ondry sns., Ary ny fibre artifisialy dia misy nylon, polyester, acetate, sns. Ity manaraka ity dia fampahafantarana amin'ny an-tsipiriany ny kofehy maromaro ampiasaina matetika:
A. Nylon b. Nylon c. Nylon d. Nylon nylon dia mizara ho "nylon 6" sy "nylon 66". “Nylon 66 ″ karazana fananana ara-batana dia tsara kokoa noho ny“ nylon 6 ″, lafo kokoa ny vidiny. Amin'ny toe-javatra mahazatra, miaraka amin'ny afo hamoaka setroka fotsy, manimbolo karazana tsiro voantsinapy. Matetika nolokoana amin'ny loko asidra izy io.
B, Polyester: Ny teny anglisy dia "Polyester", amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe "T". Amin'ny toe-javatra mahazatra, miaraka amin'ny setroky ny afo (fa mitandrema ihany koa, aorian'ny lakaoly nilona noho ny antony, lasa setroka mainty koa ny fandoroana, koa tandremo mba hanavaka), mirehitra haingana kokoa, manimbolo fofona maimbo. Ny loko miely dia matetika ampiasaina amin'ny fandokoana. Ny fiheverana dia tokony homena ny fiovan'ny loko sy ny fahamainan'ny sublimation.
C. landihazo d. Landihazo Amin'ny toe-javatra mahazatra, miaraka amin'ny afo, miadana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny afo, mavo ny lelafo, mandoro ny tsiro izay mahazatra antsika kokoa. Ny lavenona landihazo voajanahary dia fotsy. Ny lavenona Rayon dia mainty amin'ny ankapobeny, saingy mitovy ny tsirony. Matetika nolokoina amin'ny loko reaktifa na mivantana.
D) karazana mifangaro toy ny: polyamide / polyester interwoven (N / T), polyamide interwoven (T / N), polyamide interwoven (N / C), polyamide interwoven (C / N), polyester / cotton interwoven (T / C) , landy-polyester interwoven (C / T) ary karazana fibra mifangaro. Ohatra, ny "N / C" dia midika hoe "ny Warp dia nylon, ny weft dia ny landihazo", ny "C / N" dia midika hoe "ny warp dia landy, ny weft dia nylon". Sy ny sisa.
E, misy koa ny fibre acetate, volon'ondry, landy hemp ary kofehy hafa, misy koa ny mifangaro, ao ny fibre Tencel (English Tencel, miaraka amin'ny ravina toy ny fibres viscose).
2. Fanasokajiana araka ny fomba fanenomana:
Araka ny fomban'ny fanenomana, dia mizara lamba vita amin'ny tenona, lamba voatenona ary lamba tsy tenona, izay azo zaraina manaraka ireto:
A. fanjairana: matetika no misy ny zaitra boribory sy ny fikororohana taolana
B. Lamba tenona: ny lamba vita amin'ny kofehy mifangaro sy kofehy vita amin'ny kofehy. Araka ny fomba samihafa amin'ny fampifangaroana ny hena sy ny lalotra, dia azo zaraina ho Taffeta, Twill, Sattin ary Dobby, sns. amin'ny fotoana iray ihany, izy ireo dia atambatra eo amin'ny vala na ahidratsy hamoronana lamina isan-karazany. Raha fintinina dia misy karazana fanovana maro, izay mila dinihina sy ho tanterahana amin'ny asa azo ampiharina.
C. Lamba tsy voatenona: vita amin'ny alàlan'ny fametahana mivantana sy famatrarana kofehy tsy voatenona.
3. Azo zaraina ho:
A, FDY, DTY, ATY. Ny vokatra vita amin'ny FDY dia nylon, polyester, lamba FDY Oxford; Ny vokatra namboarin'i DTY dia misy kofehy lohataona, volom-boasary, lamba Oxford somary lavalava sns. ATY dia ampiasaina indrindra amin'ny fanenomana sokatra. Misy ihany koa ny fomba izay afangaro avy etsy ambony mba hamokarana vokatra samihafa.
B, hazavana antsasaky ny tany, fongana ary flash. Semi-hazavana dia vokatra voajanahary kokoa, raha tsy misy fitsaboana manokana, mazàna dia somary hazavana ny fibre; Fandringanana amin'ny dingan'ny famokarana fibre hanampiana ny vokatry ny titane oksida, mba hahafahan'ny lamba manakaiky kokoa ny vokatry ny kofehy voajanahary, hatsaran-tarehy ahazoana aina kokoa; Ny Flash dia fahatsapana hazavana taratra amin'ny fibre mandritra ny famokarana fibre amin'ny alàlan'ny fananganana ny faritra misy azy ireo ho telozoro na amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny tampon'ny fibra.
4. Karazan-damba mahazatra:
1, Taffeta: nylon Taffeta matevina, polyester Taffeta, polypolyester mifangaro Taffeta, toe-javatra ankapobeny: tsara ny kofehy, mazava sy malama ny lamba, somary manify, toy ny: nylon 70D × 190T, 210T, 230T; Nylon 40D × 290T, 300T, 310T; Polyester 75D * 190T, 68D * 190T; Polyamide polyester interwoven 40D × 50D × 290T, sns. Matetika vita amin'ny kofehy FDY izy io.
2. Oxford: nylon Oxford, polyester Oxford ary tasilong Oxford. Amin'ny ankapobeny, ny kofehy dia matevina miaraka amin'ny tanjaka tsara sy lamba matevina kokoa, toy ny nylon 210D, 420D ary 840D (an'ny kilasy FDY). Polyester 150D, 300D, 600D, 1200D (an'ny kilasy DTY); Polyester 210D, 420D (kilasy FDY); Taslon 200D × 300D, 400D × 500D (an'ny kilasy ATY), sns.
3. Taslon: nylon Taslon, polyester Taslon ary Oxford Taslon. Toe-javatra ankapobeny: matevina kokoa ny kofehy vita amin'ny kofehy, mavesatra ny velaran'ny lamba, ary manana ny fahatsapana harena izy ary mahatsapa ny landihazo mihodina. Toy ny: nylon taslon
Andriamatoa Zheng (306949978) 10:23:21
70D * 160D * 178T, 184T, 228T, taslon 320D, 640D, taslon Oxford 200D * 300D, 400D * 500D, sns.
4. Subtextile lohataona (Pongee): kofehy polyester DTY misy lamba ambonin-dabo (afa-tsy 50D) sy fahatsapana malefaka toy ny: subtextile lohataona lohataona 75D * 190T, 210T, 240T, 50D * 280T, 290T, 300T, sns .
5. Trilobal: nylon taffeta, polyester taffeta, poly-polyester interlace flash, izany hoe, kofehy tenona toy ny kofehy mamirapiratra, toy ny: ni flash 70D * 190T, 210T, polyester flash twill, sns., Miaraka amina flash tokana sy flash roa ( misaraka kosa ny fikororohana na ny kofehy satria ny landy flash dia antsoina hoe flash tokana, ary ny fikororohana sy ny kofehy ho toy ny landy flash dia antsoina hoe flash flash).
6, Twill (Twill): ny lamba ambonin'akanjo ho an'ny Twill, lamba twill amin'ny ankapobeny ny hakitroky ny hena sy ny fanenomana. Toy ny: twil nylon 70D * 210 * 230T, 272T, 290T, polyester twill 75D * 75D * 230T, 260T, ary twill mifangaro.
7. fanenomana: toy ny brocade / polyester interweave (N / T), brocade / cotton incweave (N / C), polyester-cotton cotton interweave (T / C), sns ny nylon sy polyester dia mety FDY, DTY na ATY, semi-luminous, matte na mamiratra. Anisan'izany, ny kofehy vita amin'ny landihazo dia mizara ho sisin-dàlana ankapobeny, atsobaka, atsoboka, ary mbola misy kofehy volotsangana ihany.
8. hoditra peach (Microfiber): fantatra ihany koa amin'ny hoe Microfiber. Toy ny polyester peach leather 43022 (75D * 240T), 43099 (75D * 150D * 220T), 43377 (twill, 75D * 150D * 230T), sns.
9. Satin sy satin.
10. Ho fanampin'izay, misy koa ny makarakara (Ripstop), jacquard (Dobby), sns izay namboarin'ireo fiovan'ny karazana lamba etsy ambony.
V. fanandramana ny famaritana ny lamba:
Ao amin'ny asa dia tsy maintsy mitandrina foana ny fahamarinan'ny famakafakana famaritana lamba, raha vao ny fahadisoana dia hiteraka tsy fahampiana tsy azo ihodivirana, noho izany dia tokony handinika manokana ny fandalinana ny fandinihana ny famaritana ny lamba sy ny fanavakavahana, ary hifantoka amin'ny fandraisana ny traikefa amin'ny asa , alao antoka fa hahatratra ny famakafakana marina.
1. Toetran'ny lamba: nylon, polyester, landihazo, N / C, T / C, sns.
2. Toetra misy kofehy: FDY, DTY, ATY, sns.
3. Fomban-tarehy (toetra mampiavaka azy): tenona tsotra, kofehy, fizahana, tenona satin, Dobby, sns
A. tenona tsotra: kofehy tokana sy kofehy tokana, kofehy roa sosona ary kofehy roa sosona, kofehy roa sosona ary kofehy tokana sy kofehy avo roa heny (kofehy kofehy kofehy), sns.
B. twill: 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, sns.
C, lattice: misy lattice miafina, tsipika mitsingevana (tsipika roa mitsingevana, andalana telo mitsingevana), ary jereo ihany koa ny haben'ny makarakara, ny isan'ny tsipika meridional sy zonal ao anaty kiran-damosina ary ny tenona mitsingevana amin'ny tsipika mitsingevana .
D. ho an'ny satin, firy ny karatra (na karatra) mitsingevana ny hena (na karatra) ary firy ny karatra (na karatra) milentika ny hena (na kofehy)?
E, karazana Dobby, mifantoka bebe kokoa amin'ny famakafakana ny lalànan'ny lamba manenona.
F. tandremo ireo fomba sy endrika hafa.
Denny manisa na isan'ny kofehy: warp, weft ary isa F mifanaraka aminy.
5, hakitroky ny hena sy ny harona: aza hadino ny mahatakatra ny lalàn'ny fanenomana lamba, ny isan'ny isa ary ny kajy ho marina.
6. Fahazavana-kely, fongana na flash.
7. Ny sakan'ny lamba (tandremo ny sakany ao anatiny na ivelan'ny lavaka, ary jereo ihany koa ny sakan'ny vokatra vita vita aorian'ny fampiharana lakaoly na fanodinana hafa).
Vi. Fitsinjarana voa mahazatra (tovana)
Toko ii fahalalana fototra momba ny fandokoana sy ny famitana lamba
I. dingana fanodinana fototra
Fanaraha-maso ny embryon ary fametavetana dyeing sy fanamainana lamba embryo nozairina, famaranana sy fanodinana aorian'ny fizahana (ao anatin'izany ny famolavolana, ny fametahana, ny fanoratana, ny fanoratana, ny fanoratana, ny fametahana ny PVC, ny hoditra PU, ny fitambarana, ny fipetrahana, sns.)
Ii. Fampidirana ny fizotran'ny fizotrany sy ny fifehezana:
1. Fanaraha-maso ny embryon sy ny lamba fanjary tsaika nozairina:
A. izany hoe lamba embryon iray no nozairina tao anaty horonan-taratasy lehibe na boaty fiara iray, antsoina hoe «cylinder», ny isan'ny varingarina A dia miova arakaraka ny fanodinana lamba.
B. Fanaraha-maso ny embryon dia mifehy indrindra ny kalitaon'ny lamba embryon mba hahitana raha misy tsy fetezana toy ny fanaovana sary, fisie, famaohana maty, teboka mavo, toerana mavo, sns. Mandritra izany fotoana izany dia tokony hojerena ny fijerena raha ny lamba dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Amin'ny toe-javatra mahazatra dia takiana isa maromaro.
A. Mba hitazomana ny kofehy tsy hikororosy mandritra ny fanenomana dia mosarena ny kofehy, noho izany dia tokony hohajaina talohan'ny fandokoana mba handokoana.
B. Raha tsy madio ny faniriana dia hisy teboka loko, teboka ary kilema hafa aorian'ny fandokoana.
C. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny faniriana dia tokony hosasana sy diovina ny lamba, raha tsy izany ny lamba manana sanda PH avo dia ho voaloton'ny ratsy ary hitranga ny tsy fetezana hafa.
D. mazàna misy fomba roa hilazana hevitra: des-silinder desizing ary long-car desizing. Amin'ny ankapobeny, ilay teo aloha dia nisy vokany faniriana tsara kokoa, fa ny fahombiazany ambany.
(1) fandokoana fibre simika:
A. Ny mari-pana ara-dalàna: ankapobeny ambanin'ny 100 ℃, ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana ny taffeta nylon vita amin'ny antsasaky nylon, nylon Oxford, ny twill nylon, sns. Ity fomba ity dia mora mamokatra lohalaharana sy rambo fanalefahana chromatic, havia, afovoany sy havanana fanalefahana chromatic, savony ary tsy fetezana hafa.
B. Fandokoana ny mari-pana ambony: ny mari-pana dia manodidina ny 130 130 amin'ny ankapobeny, ampiasaina amin'ny fandokoana polyester taffeta, N66, ny lamba firakotra nylon, ny polyester Oxford (filament), sns. Ity fomba ity dia mora hamokatra fahasamihafana eo amin'ny loha sy ny rambony, havia, ny fahasamihafana eo amin'ny loko afovoany sy havanana, ny lipotra, ny lokon'ny loko ary ny tsy fetezana hafa.
C. Fandokoana be loatra: ny mari-pana dia manodidina ny 100 ℃ hatramin'ny 130 ℃, izay ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana ireo vokatra polyester toy ny lamba amin'ny lohataona, volory amin'ny paiso, polyester Oxford, tullon, polypolyester interweave, sns. Ny lamba polyester dia azo zahana amin'ny tondra-drano ihany koa. Mandritra izany fotoana izany, nylon sy vokatra hafa misy ketrona dia ampiasaina amin'ny fomba toy izany. Ity fomba ity dia mora mamokatra voninkazo miloko, marika ny tongotry ny akoho, mahitsy loko ary mivalona. D. fandokoana ny axis warp: mety amin'ny karazana lamba rehetra, fa tokony hampiasaina araka ny antonony mifanaraka amin'ny kalitaon'ny kalitao. Ny mari-pana fandokoana dia azo fehezina manomboka amin'ny 100 ℃ ka hatramin'ny 130 ℃, izay mora mamokatra anomalie toy ny sisin'ny marivo sy ny zana-kazo miavaka.
(2) fomba fandokoana lamba hafa:
A. Fandokoana landihazo: fandokoana fiara lava matetika (habetsaky ny takiana), fandokoana (habetsahana na habetsahana kely azo avela), fandokoana mihoa-pefy (avela na antonony na kely azo avela). Misy loko azo ampiasaina (misy haingam-pandeha tsara), loko mivantana (tsy mahamainty tsara) ary loko mena (miaraka amin'ny fifadian-kanina tsara indrindra).
B, N / C, C / N fandokoana: ny fandokoana tafahoatra dia raisina amin'ny ankapobeny. Ny landihazo dia nolokoana aloha ary avy eo nolokoana nylon. Ny loko mihetsika dia ampiasaina amin'ny fandokoana landihazo ary ny loko asidra (miaraka amin'ny haingam-pandeha tsara kokoa) dia ampiasaina amin'ny fandokoana nylon. Ampiasao koa ny loko mivantana amin'ny loko (fahamendrehana mahantra).
C, T / C, C / T fandokoana: ny fandokoana amin'ny overflow dia raisina amin'ny ankapobeny, ny polyester dia nolokoana aloha ary avy eo nolokoana ny landihazo, ny polyester dia nolokoana tamin'ny loko manaparitaka, ny landihazo dia nolokoana tamin'ny loko reactive (fifadian-kanina tsara). Misy ihany koa ny fandokoana fiara lava, fandokoana, fampiasana loko mivantana (tsy fifadian-kanina).
(3) fanasokajiana loko:
A, loko asidra: ampiasaina amin'ny fandokoana lamba nylon, amin'ny ankapobeny mankany amin'ny loko matevina mba hanatsarana ny fahamainan'ny loko, fa koa hijerena ny safidin'ny loko mitambatra sy ny fampiasana ny Dyeing dyeing process. Ny mpitsabo mpanamboatra dia voafidy tsy mety, na ny fatra ambony loatra dia mety hiteraka fahatsapana mafy.
B. Miparitaka loko: ampiasaina amin'ny fandokoana lamba polyester. Amin'ny ankapobeny, ny fanasana VAT dia tokony hampiasaina hanatsarana ny faharetan'ny loko. Manaparitaka loko mandinika manokana ny fifadian-kanina famindrana sy sublimation.
C, loko reaktifa sy loko mivantana: an'ny an'ny maripana ambany mari-pana.
4. Fanamainana mizara roa amin'ny fanamainana roller sy fanamainana tsy mifandray)
A, tsy misy fanamainana fifandraisana tsy misy fanamainana mifangaro sy milina famolavolana, tsy misy fifandraisana eo anelanelan'ny lamba sy ny heater, miankina amin'ny tsiran'ny rivotra mafana amin'ny lamba hahatratra ny tanjon'ny fanamainana. Ampiasaina indrindra amin'ny fanamainana ny vokatra vita amin'ny loko mihoampampana mba hitazomana ny lamba ho malefaka sy manankarena. Ambony noho ny fanamainana-roller ny vidiny. B. Fanamainana amponga: ny lamba dia mifandray mivantana amin'ny amponga, ary ny tanjon'ny fanamainana ny lamba dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fanafanana ny amponga. Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana horonam-bokatra sy ny vokatra fandokoana sakamandy (toy ny landy nylon, polyester, nylon Oxford, polyester filament Oxford, sns.), Ny tilikambon'ny kilasy lava vita amin'ny landy dia mety ho voalohany amin'ny fanamainana amponga (fa mety ho voalohany ihany maina ny enina, fito maina mba tsy hiteraka mafy loatra ny tanana), ary avy eo mankanesa any amin'ilay masinina hanaovana fanodinana rano hanatsarana ny rano. Vidina fanamainana ambany.
5. Fanaraha-maso eo anelanelany:
A. Ny fizahana ifotony dia hizaha toetra hafainganam-pandehan'ny lamba sy hitandrina ny kalitaon'ny lamba ambonin'ilay lamba, toy ny lipotra, ny tsy fitovizan'ny loko (ny tsy fitovizan'ny loko, ny fahasamihafana amin'ny lavaka), ny lokon'ny loko, ny lokon'ny loko, ny loto, ny menaka. , sary kofehy, fisie weft, strip warp, sns. B. Fehezo ny vokatra tsy mandeha miditra amin'ny faritra ambany mba hisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Rehefa vita sy namboarina ny lamba dia misy vokatra tsy mahazatra tsy azo amboarina na sarotra amboarina. C. ny lamba dia haverina alamina ary ahosotra alohan'ny hidirany amin'ny faritra manaraka.
6. Famaranana ny famolavolana:
A. Rehefa vita ny famaranana dia miorina tsara ny toetra ara-batana sy simika amin'ny lamba. Ohatra, ny shrinkage, ny sakany, ny warp ary ny hakitroky ny menaka dia tsy mora ovaina. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny famaranana ny famolavolana, ity fizarana ity dia mbola afaka manao fanodinana vitsivitsy ihany, toy ny rano mikororoka (tsy tantera-drano), malefaka, amin'ny resina, tsy mahazaka afo, antistatika, rano supersplash (fitsaboana teflon), mandray ny hamandoana hamoahana ny hatsembohana , miady amin'ny bakteria hisorohana ny fofona miandry vetivety. B. Noho ny maripana avo lenta dia tokony hojerena ny fiovan'ny loko alohan'ny sy aorian'ny fametrahana azy, indrindra ny loko marefo sasany, toy ny volondavenona, maitso tafika, khaki mazava, sns. Ireo vokatra amin'ny ankapobeny dia takiana mba hampifanarahana amin'ny loko farany . Ny famolavolana C. dia afaka mifehy ny sakany, ny hena ary ny hakitroky ny kofehy, ny fihenan-tsasatra sns, indrindra ny fifehezana ny fihenan-tsofina, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny vidin'ny fikarakarana, noho izany dia tokony jerena manokana. (ny fepetra takian'ny orinasan'ny orinasanay dia mazàna manasa ny fihenan'ny 3%, manasa mafy ny fihenan'ny 2%). Ny antony lehibe manimba ny vokatry ny famolavolana dia ny hafanana, ny hafainganana ary ny fisotroan-toaka be loatra. D. Fampidirana karazana fanodinana maromaro:
(1) manaparitaka rano hamaranana ny famolavolana lamba dia manana tantera-drano sy vovoka;
Ny famaranana malefaka ny famolavolana dia mahatonga ny lamba hahatsapa ho malefaka sy malama, fa tandremo sao hisintona kofehy ilay lamba. Ny rano manaparitaka sy ny setroka malefaka dia azo atao miaraka amin'ny fotoana iray, ka mahatonga ny lamba tsy ho tantera-drano sy ho malefaka, fa ny manalefaka kosa hisy fiantraikany amin'ny rano mikorontana.
(3) ny resin dia mamarana ny famolavolana no ampiasaina indrindra amin'ny volon'ny kofehy mafy ary avelao ho henjana, ny sasany amin'ny resina dia misy formaldehyde, tokony hihaino tsara ny fifantenana; Ny rano famaohana sy ny resina dia azo tanterahina miaraka amin'izay, ary misy vokany mampiroborobo ny mpitsabo resin.
Ny retardant amin'ny afo dia mamarana ny famolavolana ny asan'ny retardant amin'ny lamba manana anjara asa fanampiny, ny retardant amin'ny lelafo dia azo atao miaraka amin'ny famaranana ny famolavolana ny rano, fa ny fijerena manokana ny fisafidianana rano rano, raha tsy izany ny vokany ny retardant amin'ny lelafo dia lehibe loatra.
Antistatic famaranana ny famolavolana mahatonga ny lamba manana ny asany ny antistatic, afaka hamarana ny famolavolana amin'ny rano splash amin'ny fotoana iray ihany, fa misy fiantraikany ny rano splash.
Ny fifohana ny hamandoana 6 sy ny hatsembohana dia mamarana ny famolavolana mba hahafahan'ny lamba mandray haingana ny hatsembohana, ny akanjo fanatanjahan-tena dia manana fiononana lehibe kokoa. Tsy vitanao amin'ny rano izany.
Ny fanodinana deodorant antibiotika dia ny famelana ny lamba misy fiasan'ny bakteria, ampiasaina amin'ny toeram-pitsaboana.
Ankehitriny dia napetraka ny rano mihoampampana (antsoina koa hoe fitsaboana teflon): noho ny rano famafazana mahazatra misy vokany tsy tantera-drano sy vovoka kokoa, fa misy koa ny fisorohana solika. Amin'ny ankapobeny, ny vahiny dia hangataka ny mari-pamantarana dupont.
7. Calendering sy gluing:
A, ny vokatry ny fampitoniana fanitsiana fahatsapana malefaka dia mahatonga ny lamba fitoniana ho fisaka kokoa, manenjana ny elanelana misy eo amin'ny fibre lamba mba hisorohana ny vokany na hahatonga ny lakaoly hahatratra ny tsindry rano avo kokoa hahatonga ny lakaoly ho malama kokoa sy ambonin-javatra manindry manana manana mamirapiratra vokany Ireo singa telo amin'ny calendering dia ny mari-pana, ny hafainganana ary ny tsindry. Ny calendering dia manova ny lokon'ny lamba. C. Ny lakaoly dia afaka manao ny lamba tsy ho tantera-drano, tsy misy porofon-drivotra, misy rivotra ary koa asa hafa, ary koa kofehy matevina amin'ny lamba, mampitombo ny fijery sy ny fahatsapana ary mampitombo ny fahatsapana, mahatonga ny lamba ho sarobidy kokoa ampiasaina. D. acrylic (fantatra koa amin'ny anarana hoe AC, PA), adiresy PU, adhesive miaina ary azo afindra, izay azo zahana ho adhesive mangarahara, adhesive fotsy, adhesive volafotsy, adhesive miloko, adhesive perila, adhesive uri sns. Azonao atao koa ny manampy ny akora mifandanja ao amin'ny lakaoly mba hananany anti-uv, lelam-pitana, fanoherana ny lokony ary vokatra hafa.
E. Tandremo ny fifehezana ny tsindry rano, ny fahatsapana (hateviny, malefaka sy mafy), ny fitoviana amin'ny lakaoly, ny tanjaka amin'ny hoditra, ny fanoherana ny rano (fotsifotsy), ny fotsifotsy, sns. Diniho ihany koa ny fiparitahan'ny kôlidôla, ny dian, na maina. Ny fifantohana dia tokony homena ny vokatry ny lampihazo eo amin'ny fantsom-pijanonan'ny rano (strip Strip / PU strip).
8, fifamatorana PVC: tandremo ny hatevin'ny fatorana, fahatsapana, fatorana ny tanjaka peel, ny kalitaon'ny endrik'ilay fametahana.
9. Fanodinana hafa: PU maina (taratasy misaraka), fitambarana, hoditra PU, sns.
10. Manasa: lamba landihazo sasany, N / C, T / C no tokony hosasana. Ny fanasana rano dia azo zaraina amin'ny fanasana rano tsotra, fanasana rano malefaka ary fanasana rano anzima (fanesorana ny volo eo ambonin'ny lamba landihazo).
11. Fanaraha-maso farany: zahao ny kalitaon'ny vokatra vita, sokajy azy ireo, fonosana ary alamino ny fandefasana azy ireo, ary amin'ny ankapobeny dia manaova rakitsoratra fanaraha-maso sy latabatra mifanentana. Ny olana rehetra dia tokony ho fanamarihana ara-potoana amin'ny mpivarotra mba hifandraisana amin'ny mpanjifa.
Toko iii manasongadina ny kalitaon'ny lamba
1, sakany: amin'ny ankapobeny dia ilazana ny sakan'ny mahomby, izany hoe, ny sakany pinhole, na aorian'ny lakaoly mahomby sakany.
2, hakitroky ny hozatra sy ny karatra: tsy maintsy mitandrina ny fandrefesana ny halavany sy ny hakitroky ny taolana.
3, fikororohana kofehy: ny tadin'ny lamba mavesatra amin'ny tadin'ny lamba ankapobeny dia tsy tokony ho lehibe noho ny 3%, ny fanenomana lamba tsotra tsy hihoatra ny 5%.
4. Taham-pivoarana: ny tahan'ny fihenan'ny vokatra vita amin'ny torolàlana meridional sy zonal aorian'ny fanasana.
5. Famaritana rano: ny ISO dia refesina amin'ny degre (50 degre tsara ~ 100 degre tsara) na amin'ny ambaratonga AATCC (elanelam-potoana 1 ~ 5 degre tsara). Ny ambaratonga AATCC 3 dia mitovy amin'ny ambaratonga 80 ambaratonga ISO.
6, haingam-pandoko: ity dia famantarana iray tena lehibe, misy ny fahamaotinana fanasan-damba (miaraka amin'ny fahamendrehana amin'ny lokon'ny loko, ny faharetan'ny loko), ny hafitsoky ny rano (mihalefy, voaloto miaraka amin'ny loko), ny hainganan'ny loko (ny masoandro) ary ny fahamailon'ny fikosehana (mahazo manjavona, voaloko miaraka amin'ny loko), ny fihazakazahan'ny hatsembohana (manjary manjavona, voaloto miaraka amin'ny loko), ny fahamendrehan'ny sublimation, ny fandokoana ny pad, sns, izay refesina amin'ny elanelam-potoana (1 ~ 5).
7. Tanjaka: tanjaka mahery, tanjaka mandatsa-dranomaso ary tanjaka vaky (kg / cm2).
8. Fanoherana ny tsindry rano: ny tanjaky ny fanoherana ny tsindry rano (mari-pahaizana tsy mahazaka rano), toy ny 2000mm / H2O (tsanganana rano mm), dia avo kokoa ny sandany, tsara kokoa ny fampisehoana tantera-drano.
9. Fidirana hamandoana: ny singa dia g / M2 * Andro, manondro ny kalitaon'ny rano mandalo lamba 1 metatra toradroa ao anatin'ny 24 ora amin'ny hafanana sy hamandoana iray.
10. Fandatsahana solika: index test ho an'ny lamba fanodinana teflon, zaraina ho 5 (fahasamihafana 1 isa ~ 5 naoty tsara).
11, ankoatry ny fampisehoana maharitra ny lelafo, anti-static, anti-ultraviolet ary toetra hafa amin'ny fitsapana, mila fikambanana matihanina ireo mba hanana fomba fitiliana, eto dia tsy misy antsipiriany.